क–कसले गरेनन् मतदान ? - Nepal No 1 News - Bishwokhabr.com
क–कसले गरेनन् मतदान ?
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा कांग्रेस गठबन्धनका उम्मेद्वार दृगनारायण पाण्डे विजयी भएका छन् । उनले आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर खड्कालाई ५ सय २८ मतभारले पछि पार्दै विजयी भएका हुन् ।
पाण्डेले ४ हजार १ सय ४० मत प्राप्त गर्दा एमालेका उम्मेद्वार खड्काले ३ हजार ६ सय १२ मत ल्याए । निर्वाचनमा २ सय ९७ मत खसेको थियो । तीन स्थानीय तहका प्रमुख मतदानमा सहभागी भएनन् । प्रदेशसभाका ८३ सदस्यहरु नै मतदानमा सहभागी भए भने स्थानीय तहका २ सय १४ मतदाता सहभागी भए ।
पाण्डेलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र उपेन्द्र यादव पक्षीय जनता समाजवादी पार्टी पार्टीको समर्थन थियो । पाण्डे यसअघि एमालेका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य थिए । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजनीतिदेखि वाक्क भएपछि उनले सांसदबाट राजीनामा दिएका थिए । हालै कांग्रेस प्रवेश गरेका उनको स्थायी घर कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका–१ हो ।
एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार भएका खड्का यसअघि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य थिए । एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनलाई माओवादीले कारबाही गरेको थियो । खड्काको स्थायी घर अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका–५ हो ।
बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख धवलशमशेर राणा, नरैनापुर गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह र गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिका अध्यक्ष अशोककुमार थापाले मतदान गरेनन् ।
राणा एमाले, कांग्रेस र माओवादीको जुधाइमा सहभागी नहुने भन्दै मतदानमा सहभागी भएनन् भने थापा र शाह बिरामी छन् । बिरामी थापाको काठमाडौंमा र शाहको भारतमा उपचार भइरहेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा राणा राप्रपा, थापा कांग्रेस र शाह जसपाबाट निर्वाचित हुन् ।
मतदानमा १ सय ३४ महिला र १ सय ६३ पुरुष सहभागी भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले बताए । मतदानमा सहभागी भएकामध्ये २७ जना कोरोना संक्रमित थिए । उनीहरुका लागि छुट्टै मतदान केन्द्र राखिएको थियो । प्रदेशसभाका ३ महिला, स्थानीय तहका १९ महिला र ५ पुरुष मतदाता कोरोना संक्रमित थिए ।
गण्डकी प्रदेश: समय सीमा आज दिउँसो ३ बजे सकिँदै , बन्लान् त मुख्यमन्त्री पोखरेल ?
एमालेको विज्ञप्ति : नरोत्तम वैद्यको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक, फौजदारी कानुन आकर्षित हुन्छ
कोरोना महामारी : विश्वभर ३८ लाखभन्दा धेरै संक्रमितको मृत्यु, १५ करोड ९९ लाख निको भए